इक्यान मेलामा आज विद्यार्थीहरुसँग अन्तरक्रिया हुने - Kendrabindu Nepal Online News
इक्यान मेलामा आज विद्यार्थीहरुसँग अन्तरक्रिया हुने
प्रदेश ३, शिक्षा, समाचार
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले शुक्रबार राजधानीको भुकृटीमण्डपमा विदेशमा उच्च शिक्षा लिएर स्वदेश फर्किएका विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने भएको छ । बिहीबारदेखि सुरु भएको इक्यान शैक्षिक मेलामा डा. समीर दीक्षित, मानुषी यमी भट्टराई र बिनोद पौडेलले विद्यार्थीसँग आफूले विदेशमा अध्ययन गर्दाका अनुभव साट्नेछन् ।
दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म हुने कार्यक्रम तीन जनाले विदेशमा रहँदाका अनुभवहरु विद्यार्थीलाई सुनाउँदै विदेशमा उच्च शिक्षा लिँदाका फाइदाबारे जानकारी दिनेछन् । समीर दीक्षित अष्ट्रेलियास्थित वेस्टर्न सिड्नी विश्वविद्यालयबाट प्रोवायोटिक्समा विद्यावारिधी गरेका हुन् । सञ्चारकर्मी, अभिनेता समेत रहेका उनले अष्ट्रेलियामा रहँदा संगालेका अनुभवहरु विद्यार्थीहरुसँग अन्तर्क्रियामार्फत साट्नेछन् ।
त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकी छोरी तथा युवा नेता मानुषी यमी भट्टराईले पनि विद्यार्थीसँग भारतको जवाहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा अध्ययन, त्यहाँको बसाइ र शिक्षाबारे आफूले बटुलेको जानकारी दिनेछिन् ।
प्यानल डिस्कसनमा बिनोद पौडेल पनि हुनेछन् । बेलायतमा एमबीए सक्याएर नेपाल फर्किएपछि हाल चलचित्र निर्माणमा हालेका पौडेलले पनि विद्यार्थी तथा उनीहरुका अभिभावकसँग अनुभव साट्नेछन् । बेलायतको ट्रिनिटी सेइन्ट डेभिड विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका उनी केही समय अगाडि प्रदर्शन गरिएको चलचित्र बुलबुलका निर्देशक हुन् । कार्यक्रममा यूवा अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मी नारायण कडेरियाले प्यानल डिस्कसनको मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।